I-ES File Explorer ye-PC Windows (10/8/7) Thwebula
Mashi 10, 2021 ngu Umhlahlandlela Wokuqondisa Shiya umbono
1 Landa i-ES File Explorer ye-PC Windows xp / 7/8 / 8.1 / 10 (32 kancane - 64 kancane) Mahhala
1.1 I-ES File Explorer Landa i-PC Windows 7 /IWindows 8 / Windows 10 Mahhala
1.2 Izici ze-ES File Explorer App ku-PC Windows
2 Ungalanda kanjani futhi ufake i-ES File Explorer ku-PC Windows 10/8.1/8/7 ne-Mac?
3 Ungalanda kanjani futhi ufake i-ES File Explorer ye-PC (lwe-Windows 10/8/7 & mac)? Okokufundisa Kwevidiyo
3.1 Okuningi kusuka kusayithi lami
Landa i-ES File Explorer ye-PC Windows xp / 7/8 / 8.1 / 10 (32 kancane - 64 kancane) Mahhala
I-ES File Explorer ye-PC - Bafo!! Kulesi sihloko, ungabona ukuthi ungalanda kanjani futhi ufake ifayili le- I-ES File Explorer Ye-PC, Ikhompyutha ephathekayo, kanye nedeskithophu ngoba mahhala.
Indlela yesinyathelo ngesinyathelo, Ngichazile ukulanda nokufaka ifayela le- I-ES File Explorer Ye-PC Windows 7, lwe-Windows 8, lwe-Windows 8.1, kanye neWindows 10 (32 kancane - 64 kancane).
Manje, Please go through this article and get all the details you need to know about how to Download ES File Explorer PC (lwe-Windows 10, 8, 7 ne-Mac) Ake sikubheke…
Hlola uhlelo lokusebenza oluningi lwe-PC
isimangaliso samawindi 7
landa i-tik tok ye-pc
FaceTime amawindi 7
uhlelo lokusebenza lwe-tiktok lwe-pc
Ukulanda kwe-ES File Explorer Okwe-PC Windows 7 /IWindows 8 / Windows 10 Mahhala
Imenenja yefayela le-Android inamandla, imenenja yamahhala yendawo kanye nohlelo lokusebenza nomphathi wefayela lenethiwekhi, Imenenja yefayela, Umphathi Wezindaba, Umphathi Wenethiwekhi. Abasebenzisi emhlabeni jikelele bathathe imenenja yefayela enamandla kakhulu!
Ngemenenja yefayela, ungaphatha kahle amafayela akho namafolda kuzitoreji zakho zefu nakwidivayisi. Yini enye, ungabona ukuthi mangaki amafayela & izinhlelo zokusebenza onazo kudivayisi yakho shazi ngokushesha ngemuva kokuvula Imenenja yefayela.
Landa uhlelo lokusebenza lwe-ES File Explorer
Uhlelo lokusebenza Uhlelo lokusebenza lwe-ES File Explorer lwe-PC
Kubuyekezwe 17 Disemba 2020
Inguqulo Yamanje 1.9
Inguqulo ye-Android esekelwayo 5.0 futhi phezulu
Unjiniyela Vakashela iwebhusayithi
Ukunikezwa ngu I-GreenSoft Infotech
Ukuhambisana Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista ne-Mac OS X. 10.11
Izici ze-ES File Explorer App ku-PC Windows
I-ES File Explorer Elula & Ukulanda okusheshayo!
Isebenza ngezinguqulo ze-All Windows!
Inguqulo yakamuva ye-ES File Explorer!
Ilingana ngokuphelele neWindows 7/8/10 isistimu Esebenzayo.
Umphathi wohlelo lokusebenza – khipha, ngezigaba, isipele, bese wenza izinqamuleli ezinhlelweni zakho zokusebenza.
Cindezela ukwesekwa kwe-decompress.
Amasethi amathathu wezimpawu zokuhweba ze 100+ ibha yamathuluzi ehlukahlukene, izinhlobo zamafayela, nezinto zemenyu.
Izici eziyisisekelo ezifana nokususa, cindezela, ukusika, ikhophi, khipha njll. ifinyeleleka kalula
Ukusekelwa kwezinqumo eziningi.
Ukusekela 20+ izilimi.
Yabelana futhi useshe amafayela.
Uhlu nokubukwa kwegridi kwemenenja yefayela.
Isithonjana sesithombe, video nama-apk.
Ukukhetha okuningi nokuxhaswa okuhlukile kokuhlunga.
Sekela isinqamuleli sefayela kusikrini sasekhaya ukuze ufinyelele kalula.
Ungalanda kanjani futhi ufake i-ES File Explorer ku-PC Windows 10/8.1/8/7 ne-Mac?
Kusukela manje, alukho uhlelo olusemthethweni noma isoftware ye-ES File Explorer eyenzelwe iWindows PC. The only way to install ES File Explorer on a Windows computer is by using an Android emulator.
Kunezindlela ezimbili zokufaka i-ES File Explorer ku-PC:
Landa futhi ufake i-ES File Explorer ku-PC usebenzisa i-BlueStacks App Player
Landa futhi ufake i-ES File Explorer ku-PC usebenzisa i-Nox App Player
Izinyathelo zokulanda nokufaka i-ES File Explorer ye-PC Usebenzisa ama-Bluestacks:
Okokuqala nje, Landa ifayela le- BlueStacks emulator bese ufaka ama-Bluestacks 4 exe ku-PC yakho noma kwi-laptop.
Lapho lesi simemezelo sesisunguliwe, futhi sicela uchofoze inkinobho ye-My Apps.
Sicela useshe iMenenja yefayela ye-ES.
Uzobona imiphumela yosesho yalolu hlelo lokusebenza lwe-ES File Manager. Chofoza ukufaka.
Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho yakwa-Google ukulanda lolu hlelo lokusebenza lwe-ES File Manager ku-Google Play ku-BlueStacks.
Faka uhlelo lokusebenza lwe-ES File Manager bese uqala ukuyisebenzisa ngokushesha.
Izinyathelo zokulanda nokufaka i-ES File Explorer ye-PC usebenzisa i-Nox app player :
Landa i-Nox App Player
Okokuqala nje, Faka ifayela le- Isidlali sohlelo lokusebenza lweNox ku-PC yakho
Ngemuva kokuyifaka, sebenzisa isidlali sohlelo lokusebenza seNox ku-PC bese ungena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Google.
Manje sesha i-ES File Explorer App.
Faka uhlelo lokusebenza lwe-ES File Explorer ku-emulator yakho yeNox
Ngemuva kokuqedwa kokufakwa, uzokwazi ukusebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-ES File Explorer ku-PC yakho.
Ungalanda kanjani futhi ufake i-ES File Explorer ye-PC (lwe-Windows 10/8/7 & mac)? Okokufundisa Kwevidiyo
Siyabonga ngokufunda le ndatshana, Ngiyethemba uyayithanda futhi nakanjani izokusiza landa i-ES File Explorer App ye-Windows ne-Mac. Namanje, Uma unemibuzo mayelana okufanayo, bese uhlanganyela ngomusa ku- ibhokisi lokuphawula. Ngaphezu kwalokho, ufuna ezinye izinto, unganqikazi ukungithinta. Ngijabule njalo ukukusiza.
Landa iCamScanner For PC ku-Windows 10/8/7
I-Hotstar For PC Download
TLex Suite For PC Windows 10/8/8.1/7 - Landa inguqulo yakamuva
Tenorshare ReiBoot For PC Windows 10/8/7 - Thwebula Khulula Inguqulo Yamuva
Ifayelwe Ngaphansi: Download FaceTime Umakiwe Nge: es file explorer for pc apk, es file explorer for pc download, es file explorer for pc free download, es file explorer for pc windows 10 free download, es file explorer for pc windows 7 free download